Xeerarka xirashada dharka dhalada | Ragga Stylish
Sida loo xirto dharka hore ee dharka leh qaab
Dharka 'Pastel' ayaa ka farxad badan kuwa caadiga ah ee madow iyo kuwa badda, laakiin way ka khiyaano badan yihiin midabada dhalaalaya, waana sababta ay u yihiin ikhtiyaar aad u fiican bilaha diiran.
In kasta oo laga yaabo in sababta ugu weyn ee loo tixgaliyo tones pastel ay tahay in xilligan ay ku jiraan isbeddel buuxa. Hadaad go aansato, kuwa soo socdaa waa afar sharci oo aan kugu dhiirigelinayno inaad tixgeliso si aad u abuurto muuqaal aad u qurux badan.
1 Caddaan waa xulufadaada
2 Ha isku dhicin
3 Ka fiirso suudhadhka waaweyn
4 Muuji canqowgaaga
Caddaan waa xulufadaada
James iska daa
Midabka cad waa sharad aamin ah, tan iyo wuxuu ku shaqeeyaa sifiican dhamaan dharka dhalada. Waxa kale oo aad abuuri kartaa muuqaal muuqaal ah, adoo ku daraya shaati ama funaanad isku midab / midab kala duwan leeg ah. Dooro caddaan haddii aad raadineyso miyir qabow iyo xulashada codka haddii aad dareentid geesinimo.
Ha isku dhicin
Codadka aadka u madow, gaar ahaan madow, ayaa ka baxsan habdhaqanka dharka hore. Haddii aad dareento baahi loo qabo in lagaga hortago jilicsanaanteeda dhar madow, ma lihid niyadda nooca noocan ah. Haddii aad gashato, Ku dhaji qaabka 'Miami Vice' oo leh cawaaqibkeeda oo dhan.
Ka fiirso suudhadhka waaweyn
In kasta oo xarkaha lagu rakibay ay sii ahaanayaan kuwa ugu caansan marka laga hadlayo dacwadaha, naqshadaha baagaga ayaa mar kale dhulka sii helaya Catwalks ayaa soo kabanaya ruuxda 80s Jaakadaha garabka lagu duugo ee Sonny Crockett iyo surwaal boorso leh ayaa mar kale qabow.
Dharka 'pastel' ayaa bixiya jimicsi xagaaga ah iyo fasax. In kasta oo loo gashan karo habka caadiga ah, Waxaan uga faa'iideysan doonnaa inta badan haddii aan ku sharadno surwaal dhererkiisu noo oggolaanayo inaan soo bandhigno anqawyadayada. Haddii kale, waxaad had iyo jeer siin kartaa baaska laba ama saddex jeer oo soo rogmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Sida loo xirto dharka hore ee dharka leh qaab
Wax dheeri ah malahan dhegahaaga? Waxaa jira dawooyin dabiici ah oo waxtar badan
Baro khiyaanooyinka guriga si looga fogaado dhidid dhidid la'aan ah